China phenacetin umthengisi umzi-mveliso kunye nabavelisi | Guanlang
CAS 62-44-2 Igama phenacetin
Imbonakalo Umgubo omhlophe wekristale MF C10H13NO2
Ubunyulu 99% min I-EINECS No 200-533-0
Isicelo Amachiza/amashishini/izilwanyana njalo njalo IBanga EP,USP,CP,JP
Indawo yokubilisa 132 °C / 4mmHg Indawo yokunyibilika 133-136 °C(lit.)
Ukuxinana 1.1248 (uqikelelo olurhabaxa) Ubunzima beMolekyuli 179.22
Indawo yemvelaphi iTshayina(Hebei) Uphawu Crovell
Ixesha lokuzisa Kwiiyure ezingama-24 Qhagamshelana ULily
Singomnye omkhulu phenacetin umenzi kunye nomthengisi eChina, sisebenzisa itekhnoloji entsha yokuvelisa i-phenacetin kwaye ubukhulu becala sithumela ngaphandle kwiimarike zaseYurophu kunye nezaseMelika.
Phenacetin iinkcukacha Yazisa :
IPhenacetin ngumgubo omhlophe, ocwebezelayo, ongamaxolo okanye omhlophe oyikristale, iPhenacetin enganyibiliki emanzini, iPhenacetin inyibilika kancinane kwi-ether, iPhenacetin inyibilika kancinane emanzini abilayo, iPhenacetin inyibilika kwi-ethanol kunye nechloroform. kwisisombululo emva kokulahla i-nitric acid i-orenji yellow.Phenacetin ayinavumba, incasa ekrakra kancinane.
Impembelelo ye-antipyretic ye-phenacetin yomelele kunempembelelo ye-analgesic, umphumo uyacotha kwaye uhlala uhleli, kwaye unempembelelo engcono kunyango lwentloko, i-neuralgia, i-arthralgia kunye nomkhuhlane.
I-Phenacetin esetyenziswa njengezinto eziluhlaza kwi-organic synthesis kunye ne-intermediates yeziyobisi
Ukucoceka kwePhenacetin unokuqiniseka, kuba sithengisa i-phenacetin iminyaka emininzi kwaye itekhnoloji yethu iphumelele kakhulu, ukucoceka kwePhenacetin kunokufikelela kwi-99.9%
Iphakheji ye-Phenacetin yi-25kg yeekhathoni zemigqomo, ukuba ufuna nje ukuthenga isampuli sine-1g okanye i-1kg ye-Aluminiyam yeefoil bag.
Indlela yokuhanjiswa kwe-Phenacetin sino-SEA / AIRPORT / EXPRESS / SECURE LINE
I-Phenacetin sinokuthembisa i-100% ngamasiko , ukuba awufumananga okanye amasiko akho atshabalalisa iimpahla, sinokukubuyisela imali okanye sikuthumele kwakhona.
Siya kuyikhusela imali yakho ukuba ingalahleki.
I-Phenacetin ngoku ithandwa kakhulu kumazwe amaninzi, kwaye inkampani yethu liqela lobuchwephesha, xa uhlawula ufuna nje ukulinda iimpahla ezifunyenweyo, ixesha lokuhambisa i-Phenacetin ngokukhawuleza, kwiiyure nje ezingama-24 sinokuthumela, kutheni sihambisa i-phencacetin ngokukhawuleza kuba siphethe isitokhwe ngokwaneleyo.
Sithumela ikakhulu eYurophu, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe.Siya eMexico, eHungary, eBrazil, e-UK, eJamani, eHolland, ePoland, eUnited States, eGuatemala, eTurkey njalo njalo.
I-Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. yasekwa ngo-2007, ehlala kwisixeko sase-Shijiazhuang esilikomkhulu lePhondo le-Hebei kunye necandelo le-hub phakathi kwe-Beijing Tianjin kunye ne-Hebei kwaye inenzuzo yokuhamba kakuhle. Inkampani yethu lishishini lemichiza lanamhlanje elinobuchwepheshe obuphezulu kunye noPhando noPhuhliso, imveliso kunye nokuthengisa.
Inkqubo yethu yoMgangatho
Ngaphambili: 4′-Methylpropiophenone 4-Methylpropiophenone umthengisi e china cas 5337-93-9 Ukuhanjiswa okuKhuselekileyo
Okulandelayo: Ababoneleli beValerophenone baseTshayina abanecas 1009-14-9 kwimarike yaseYurophu naseMelika
phenacetin powder abenzi
phenacetin powder umthengisi
phenacetin powder abathengisi
phenacetin umthengisi e china